Gareen kubbaa miillaa Waaliyaa Gulaallii Waancaa addunyatif boruu ni taphatu – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Gareen kubbaa miillaa Waaliyaa Gulaallii Waancaa addunyatif boruu ni taphatu
On Oct 8, 2021 263
Finfinnee, Fulbaana 28, 2014 (FBC)- Gareen Biyyaalessa kubbaa miillaa Ityoophiyaa Waaliyaan gulaallii sadaffaa Waancaa addunyatiif guyyaa boruu Magaalaa Baahir Daaritti garee kubbaa miillaa Afrikaa Kibbaa waliin kan taphatu ta’uu ibsameera.
Gareen kubbaa miillaa Waaliyaan waancaa addunyaa bara 2022 Kuwaataaritti gageeffamuuf ramaddii 7ffaan tapha gulallii Gaanaa, Zimbaabuwee fi Afrikaa Kibbaa waliin akka taphattuuf ramadamuun ishee ni yaadatama.
Gareen kubbaa miillaa Ityoophiyaa kanaan dura tapha Gaanaa waliin taphateen 1 fi 0 injifatamuu fi garee kubbaa miillaa Zimbaabuwee 1 fi 0 injifachuun isaa kan yaadatamudha.
Gareen kubbaa miillaa Waaliyaa garee ramadicha qabxii afuriin dursu garee kubbaa miillaa Afrikaa waliin Isaadiyeemii idil addunyaa Baahir Daaritti kan taphatu ta’a.
Zidaan Maachisteer Yuunaayitiid leenjisuuf fedhii hin qabu jedhe
Tapha gulaallii waancaa Addunyaan Ityoophiyaan Gaanaa waliin qixa baate
Astoonviilaan Isteevaan Jeeraard leenjisaa taasiisuun muude
Atleet Daawwiit Siyyuum fiigicha fageenya Km 5 riikkardii haaraa galmeessite
Zidaan Maachisteer Yuunaayitiid leenjisuuf fedhii hin qabu…
Tapha gulaallii waancaa Addunyaan Ityoophiyaan Gaanaa waliin…